सार्वजनिक कार्यक्रमै पूर्व युवराजले धूमपान गरेपछि तहल्का ! – Everest Dainik – News from Nepal
सार्वजनिक कार्यक्रमै पूर्व युवराजले धूमपान गरेपछि तहल्का !
हेटौडा, असार २२ । पूर्वयुवराज पारस शाहले फेरी अर्को विवाद आउने कार्य गरेका छन् । केही हप्ताअघि काठमाडौंमा ट्राफिक प्रहरीलाई थर्काएर विवादमा आएका पारस फेरी अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममै धूमपान गरेर विवादमा आएका छन् ।
‘राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा मौलिक पहिचान संरक्षण गर्ने’ अभियानका विषयमा जानकारी दिन भैरहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै शाहले धूमपान गरेका हुन् । सम्मेलनका क्रममा उनले आफू देशप्रति चिन्तित हुँदै राष्ट्र अभियानमा लागेको बताए । जेठ २२ गते मनकामनाबाट सुरु भएको अभियानअन्तर्गत उनी पाल्पा, गोरखा र लमजुङ हुँदै भैरहवा आइपुगेका हुन् ।
अभियानबारे पत्रकारलाई जानकारी दिन निमन्त्रणा गरिए पनि पूर्वयुवराजले कार्यक्रमस्थलमै धूमपान गरेपछि मुख्य विषय छायामा पर्यो । झन्डै २० मिनेट पत्रकारसँग सवाल-जवाफ गर्नेक्रममा उनले तीनपटक धूमपान गरे । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Paras shah, धूमपान